बलेफी हाइड्रोपावरको आईपीओमा माग भन्दा बढी आवेदन , ८५ प्रतिसत आवेदकको हात खाली हुने !
बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडले निष्कासन गरेको आईपीओमा आवेदनको ओहिरो लागेको छ।
कम्पनीको आईपीओमा पहिलो दिन १० लाख ६२ हजार ५७५ जनाले आवेदन दिएका छन्। सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका अनुसार आज साँझ ५ बजेसम्म १० लाख ६२ हजार ५७५ आवेदकहरुले रू. १ अर्ब २६ करोड १ लाख ५१ हजार बराबारको १ करोड २६ लाख १ हजार ५१० कित्ताका लागि आवेदन दिएका हुन् । जुन मागभन्दा५ दशमलव ५७ गुणा बढी हो ।
कम्पनीले प्रतिकित्ता रु १०० अङ्कित मूल्यमा रु १८ करोड २७ लाख ९७ हजार मूल्य बराबरको १८ लाख २७ हजार ९७० कित्ता प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ )को बिक्री खुला गरेको हो ।